လတ်တလော လူနာတွေ ဆေးရုံ မသွားဘဲ အိမ်မှာပဲ ဘာ လို့ အသေခံနေကြတာလဲ? – Let Pan Daily
လတ်တလော လူနာတွေ ဆေးရုံ မသွားဘဲ အိမ်မှာပဲ ဘာ လို့ အသေခံနေကြတာလဲ?
အရေးပေါ်လူနာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုဗစ်လူနာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးရုံသွားတဲ့အခါမှာ မျှော်လင့်ချက်က နှစ်ခု တည်းရှိပါတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါကို ကုသမှုခံယူနိုင်ဖို့ရယ်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိဖို့ရယ်ပါ။ ပထမတစ်မျိုးက ပိုအရေးကြီးပြီး ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ရနိုင်ရင် လိုချင်ကြပါတယ်။ လူကောင်းတစ်ယောက်တောင် သက်တောင့်သက်သာနေချင်တာပဲဗျာ။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင် ပိုပြီးတော့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ချင်တာပေါ့။ အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ အဲဒီနှစ်ခုကို ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ဆေးရုံလာပြကြပါလို့ ခေါ်နေစရာတောင်မလိုပါဘူး။ အားကိုးစရာဒါပဲရှိတော့ မဖြစ်မနေကို လာကြမှာပါ။
အခုဘာလို့ လူနာတွေက အိမ်မှာနေပြီးသာအသေခံချင်တော့တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ အဲဒီအခြေခံ အချက် နှစ်ချက်ကိုတောင်မရနိုင်လို့ပါ။ အရေးပေါ်လူနာတစ်ယောက်ဆေးရုံရောက်တယ်။ အရေးပေါ်ကုသမှုတွေအရင်မရဘဲ ကိုဗစ်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးဖို့ ရက်နဲ့ချီစောင့်ရတယ်၊ စောင့်ရတာကလည်း သက်တောင့်သက်သာမဟုတ် လူတွေပြည့်လျှံနေတဲ့အခန်းထဲမှာစောင့်ရတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုတွေ မျက်နှာမမြင်ရဘဲ သေသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ အများစုက သေခါမှသေရော အိမ်မှာပဲ သက်တောင့်သက်သာ မိသားစုဘေးမှာထားပြီး သေလိုက်ချင်တော့တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေပါ တိုက်တွန်းနေလို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရချိန်မှာ တကယ်အကူအညီပေးနိုင်တဲ့နေရာကို ဘယ်လိုပြောပြောသွားကြမယ့်သူတွေချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြုံရဆုံရမယ့် ဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်ကြလွန်းလို့သာ အိမ်မှာပဲ အသေခံမယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာတာ။
ဆေးရုံတွေမှာ ဘာလို့ အဲဒီလောက်ထိ ကျပ်ညပ်ကုန်ရတာလဲ။ တစ်ရက်က ကိုဗစ်အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခေါင်းသေးသေးလေးရဲ့ အမြင်မှာ အချက် သုံးချက်ရှိတယ်။
၂။ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေရဲ့ အင်အားကို ယူပေးပါ။ သူတို့ကို ကုသဖို့အတွက် ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပေးပါ။ ဆေးရုံလိုနေရာမျိုးကို လူနာတစ်ယောက်တွေ့တာနဲ့ အကုန်ပိတ်ဆိုတာမျိုးက အဓိပ္ပါယ်မဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နိုင်အောင် ခွင့်ပေးပါ။ အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နိုင်နေကြတဲ့သူတွေကို ကိုဗစ်လိုအရာမျိုး စစ်ဆေးခွင့်မပေးဘူးဆိုတာ နည်းလမ်းမကျဘူး။
၃။ စင်တာအသစ်တွေတိုးချဲ့သလိုမျိုးပဲ ရှိရင်းစွဲနေရာတွေရဲ့ အင်အားတွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း တိုးချဲ့ပေးပါ။ ဘက်ဂျက်အကန့်အသတ်မဲ့သုံးစွဲမယ်ပြောပြီး စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့အရေးပေါ်ဌာနတွေကတော့ ဒီအတိုင်းပဲဆိုတာ တော်တော်ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။
ဘယ်သူမှတော့ အိမ်မှာနေပြီး အသေမခံချင်ပါဘူး။ ကုသမှုတွေရမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဆေးရုံသွားကြမယ့်သူတွေချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့်အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေ မြင်ကြားသိနေရတာတွေအရတော့ ကျွန်တော်အခုချိန် တစ်ခုခုဖြစ်လည်း အိမ်မှာပဲ အသေခံသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပါပဲ။ (ဒေါက်တာသူရိန်လှိုင်ဝင်း)
ဦးခ်စ္ေမာင္ လမ္းေပၚ က ABC ဆိုင္ ဓားျပတိုက္ ခံရၿပီး (၄) ႏွစ္ေကလး ကို ထိုးႀကိတ္သြား တဲ့ျဖစ္စဥ္
(၅)ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ သာသနာ အာဇာနည္ တစ္ပါးေပၚထြက္ လာဦးမည့္ ျမန္မာျပည္